ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलद्वारा तीन ठाउमा देखापरेको पत्थरीकाे सफल शल्यक्रिया – Himalaya TV
ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलद्वारा तीन ठाउमा देखापरेको पत्थरीकाे सफल शल्यक्रिया
६ श्रावण २०७४, शुक्रबार १८:५७
पकंज शर्मा/ झापा, ६ साउन । झापाको भद्रपुरस्थित ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलले एकै पटक तीन ठाउमा देखापरेको पत्थरीकाे सफल शल्यक्रिया गरेकाे छ ।
विरामीमा देखापरेको तीन ठाउको पत्थरी उपचार दुरविन पद्धतीबाट गराइएको हस्पिटलका सञ्चालक बालकृष्ण पोखरेल (साईराम)ले जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार एकै पटक तीन ठाउको पत्थरीकाे उपचार हस्पिटलले पहिलो पटक सफलतापूर्वक गराईएको बताए । झापा मेचीनगर ८ आयाबारी बस्ने २९ बर्षिय रिता मेचेको पत्थरीकाे उपचार गरिएको हस्पिटलका कन्र्सलटेण्ट ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डा. शशिकुमार सिहले जानकारी दिए ।
विरामी् रिताको दुई वटा किड्नी र पिसाब नलीमा पत्थरीकाे भएकाे थियो । दुवै किड्नीमा देखापरेको पत्थरीकाे उपचार कमै हस्पिटलले एकै पटक शल्यक्रिया गर्ने गरेको सर्जन डा. सिहले बताए । उहाको किड्नीमा ७ देखि १० एमएमका मल्टिपल ढुगा रहेको थियो भने, पिसाब नलीमा ९ एमएमको ढुगा देखा परेको थियो । मिनि पिसिएनएल दुरविन पद्धतिबाट किडनीको ढुगा बाहिर निकालेको र पिसाव नलीको ढुगा फुटाएर बाहिर निकालीएको डा. सिहको भनाई छ ।
वैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा बाहिर बस्दै आएकी रीता पत्थरीको उपचारका लागि विभिन्न हस्पिटलबाट औषधी लिदै आएकी थिइन् । औषधीले काम नगरेपछि नेपाल फर्किएकी उनी परिवारको सल्लाहमा ओम साईमा उपचार गराउन आएकी बताइन् । कम खर्चमा चिरफार विना दुरविनबाट सफल उपचार भएकोमा रीताले खुशी समेत व्यक्त गरेकी छिन् । हस्पिटलले ५० लाख रुपैया लागतमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मेसिन जडान गरेपछि पत्थरीकाे उपचार गराउने विरामीको चाप पनि बढ्न थालेको हस्पिटलले जनाएको छ ।